Ukwehla kweKhamera Yomzimba Ogqokwe Amaphoyisa - Ama-OMG Solutions
Ukusetshenziswa kwamakhamera omzimba ngokusebenza komthetho kuyindaba ephikisanayo. Ngenkathi ubuchwepheshe obunjalo bungasiza ukuvikela amaphoyisa ngokudambisa isimilo esingalungile nokuhlinzeka izakhamizi ezisolwe ngokungafanele ngamacala ngobufakazi, impikiswano yokungafihli lutho ngalezi zithombe isaxoxwa namanje.
Okuphikisayo ukuthi amakhamera omzimba awasizi kangako ekuxazululeni izingxabano ezenziwa ngamaphoyisa lapho kwenziwa umsebenzi wamaphoyisa, ngoba ukukhethwa kwama-angles wokudubula ama-video kungenzeka kungameleli wonke amaqiniso, izithombe azinalo iqiniso, kepha futhi kubandakanya inkinga yokuvikela ubumfihlo. Emaphoyiseni, ngaphezu kwenkinga yesabelomali, ikhamera izonyusa kakhulu umthwalo wokuphatha esiteshini samaphoyisa, ngoba kuwumsebenzi omkhulu wokucwaninga idatha ukugcina, ukugcina kanye nokuhlaziya ividiyo ethathwe yikhamera.
Isibonelo, inqubomgomo entsha ehlongozwayo izodinga ukuthi amaphoyisa ahlinzeke ngezithombe kungakapheli izinsuku ze-45, ezizosebenza ezinhlinzekweni zamanje ukuthi izithombe zizosuswa ngaphandle kokuthi zibaluleke kakhulu kwecala.
Amaphutha wokufinyelela nokuhlela izithombe
Ucwaningo lukhombisa ukuthi amakhamera womzimba awanawo umthelela omubi ekuhlukumezeni kwamaphoyisa, kepha ukusatshalaliswa kwezinyawo kungasiza ekushushisweni kobugebengu, okuholela ekwamukelweni ngokushesha kwale buchwepheshe.
Kodwa-ke, lobu buchwepheshe abukho engcupheni futhi kubukeka sengathi lobu bufakazi obungahle buhle bungashintshwa noma bususwe ngenxa yokulimazeka okuningi kusoftware eyakhelwe kumakhamera.
Kuzo zonke izimo, ukuphepha kokuphepha kuvumela umseshi ukuthi enze umonakalo, kufaka phakathi nokususa izithombe, ukuguqula okuqukethwe, ukuguqula izakhiwo zefayela, nokulanda buthule izithombe ezintsha. kushintshiwe.
Izinkinga zokuphepha ezihambisana nalezi zisetshenziswa ziqine kakhulu. UMitchell uphinde wembula izindaba zokuphepha ezihambisana nezinhlelo zokusebenza zeselula, isoftware nezinsizakalo zamafu amakhamera axhumeka kuzo, kanye nokusetshenziswa okubanzi kweziqinisekiso okulula ukuqagela kuzo.
Akukho ukubethelwa noma ukusayinwa kwamavidiyo
Awekho ama-terminals ahlolwe asetshenziswa ukuvikela kwe-cryptographic futhi awekho amafayela wevidiyo asayinwe ngedijithali. Uma izinhlaka zamaphoyisa zifisa ukusebenzisa lobu buchwepheshe ukuqoqa ubufakazi, ukungatholakali kwesiginesha kuyinkinga enkulu.
Ngaphandle kwesiginesha, okuqukethwe kwevidiyo akunakuqinisekiswa kahle noma kukhishwe ngezitembu zesikhathi - okungabuphonsela inselelo ubufakazi. Abahlaseli-ke bangakwazi ukuguqula izithombe ngaphandle kokuthi bakwazi ukubona lolu hlobo lokukhohlisa.
Amaphoyisa nawo angaba sengozini ngenxa yelunye uhlobo lwezinkinga zokuphepha. Ngaphandle kwemodeli ye-CeeSc, wonke amakhamera ahlolwe anekhono lomsakazo we-Wi-Fi futhi awakwazi ukwenza kahle amakheli we-IP ahlobene nale divayisi.
Lokhu kusho ukuthi umhlaseli angakwazi ukuthola ophethe, okudala inkinga enkulu yezokuphepha emaphoyiseni, ikakhulukazi lapho esebenza khona. Amakheli e-IP nawo angalandelelwa ukuthola ukushesha okungenzeka komsebenzi wekhamera, okungaphakamisa ukuthi kuhlaselwe okuhleliwe.
Kungenzeka futhi ukufaka isoftware enobungozi kumakhamera omzimba, okuzovumela abahlaseli ukuthi bashaye iziteshi, kudale ukuphazamiseka noma benze nokuqapha okude ngaphandle kolwazi lwabasebenzisi.
Kodwa-ke, i-body-cam iletha ezinye izinselelo ezihlobene nezinto zezobuchwepheshe, ngoba ukugcinwa nokuhlelwa kwamakhulu amahora wevidiyo kungumsebenzi onzima kakhulu.
Izinkinga zezobuchwepheshe kube yisihibe esikhulu: isikhathi sokulanda izithombe singaba yinde, okungezelela emlayweni wazo. Olunye ucwaningo lukhombe ukwenyuka kwezinga lokudinwa kwamaphoyisa aphethe le khamera futhi athi lokhu kukhuphuka komthwalo womsebenzi.
Amaphikseli wezithombe aphansi (izigidi ze-30-40). Ngaphansi kokukhanya kwelanga okuqinile, ukukhanya okubomvu akunakubonwa. Ubufakazi abukholakali. Isibani se-LED sisetshenziselwa ukugcwalisa ukukhanya. Umphumela wesithombe sobusuku awunampilo, futhi kunezithombe eziningi ezingalungile. Futhi, uhlelo luyinkimbinkimbi, ukuthembeka akulona usizo, ukulungiswa kukhulu, izindleko ziphezulu, impilo yensizakalo imfushane, futhi ukufakwa nokulungisa inkinga kunzima. Amaphoyisa we-video e-elekthronikhi anomkhuba wokushayeka kwezinga lokushisa okuphezulu kwekhompiyutha yezimboni ephakathi nendawo noma ikhompyutha efakwe ngaphakathi.
Amakhamera edijithali agxilisiwe awakwazi ukuthwebula ngokuqhubekayo, futhi amakhamera edijithali we-SLR angathwebula ngokuqhubekayo. Kepha intengo yekhamera yedijithali ye-SLR iphindwe ka-5-6 kunekhamera yedijithali egxile kokugxilile. Impilo yesibani se-elekthronikhi ayikade nje ukuthi i-LED igcwalise ukukhanya, futhi idinga ukushintshwa njalo (izinyanga eziyi-2-3), kepha umphumela wokukhanya wokugcwalisa we-flash electronic yiwona ohamba phambili.
Okokugcina, intengo ephezulu, ukuthembeka, ukuqina kufanele kwenziwe ngcono, umkhiqizo uthole izinkinga eziningi ngenkathi kusetshenziswa, abakhiqizi baphinde bathuthukise ukwakhiwa komkhiqizo ngezidingo zangempela ze-Body-cam.
Uma kusetshenziswa i-Body-cam, kubalulekile ngenxa yezizathu zomthetho wokuthi izithombe zisetshenziselwe ukufakazela ukungaziphathi kahle kwezakhamuzi kanye namaphoyisa. Vele, imigomo yokuvikela idatha kumele ilandelwe, ikakhulukazi, umgomo wokunciphisa idatha. Ngokuqondene nalokhu, akumele kufike ekusetshenzisweni okungenamkhawulo kwe-Body-cam. Ngokunjalo, isimo sezomthetho kumele siguqulwe ukuze izisulu zokubhekwa kwevidiyo zikwazi ukufinyelela leyo mininingwane nokuthi ukusetshenziswa kweSkycam akuyona kuphela ngokubona kwamaphoyisa. Isibonelo, kungacatshangelwa ukuthi i-Body-cam ivulwa ngokuzenzakalela ezimweni ezithile nokuthi izakhamizi ezithintekile zingakufuna ukushintshwa kwe-Body-cam uma zingavumelani nokuziphatha kwamaphoyisa. Okwamanje, i-Body-cam iyisisongelo esisodwa, ngoba isetshenziswa kuphela ngezindleko zezakhamizi, noma ngabe amaphoyisa enza ngokungemthetho noma cha.
Ukubuka okuphelele kwe-6768 Ukubuka kwe-4 Namuhla